ရှေးဟောင်းဘုရား နေပြည်တော်သို့ မပင့်၍ ရခိုင်လူထု ဝမ်းမြောက် | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ရခိုင်တွင် ဆန်ပြတ်နေ
The Star ၏ အယ်ဒီတာချူပ်ဟောင်း ကွယ်လွန် →
ရှေးဟောင်းဘုရား နေပြည်တော်သို့ မပင့်၍ ရခိုင်လူထု ဝမ်းမြောက်
Tuesday, 07 June 2011 14:14
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်က ရခိုင်ပြည်မှ အမရပူရသို့ သယ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီး ယခုအခါ မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်ရပ်တွင် စံနေတော်မူသော မဟာမုနိရုပ်ရှင်တော်
တူးဖော်ရရှိခဲ့သော ရှေးဟောင်း ဆင်းတုတော် အားလုံးမှာ အေဒီ ၈ ရာစု၊ ဝေသာလီခေတ်က ဆင်းတုတော်များ ဖြစ်သည်ဟု ရှေးဟောင်းသုတေသန ဦးစီးဌာန၏ အငြိမ်းစားဒု-ညွှန်မှူးတဦးဖြစ် သည့် မြောက်ဦးမြို့ခံ ဦးကျော်ထွန်းအောင်က ပြောသည်။ရှေးဟောင်း ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော်သည် ရွှေချိန် ၄ ပိဿာနှင့် ၆၄ ကျပ်သား အလေးချိန်ရှိသည်ဆိုသည့် သတင်းများ ထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီး နောက်တနေ့တွင် နေပြည်တော်သို့ သယ်ယူရန် အာဏာပိုင်များက ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ဒေသခံပြည်သူများက ဇွန် ၄ ရက်နေ့တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်းကြောင့် သယ်ယူမည့်အစီ အစဉ်ပျက်သွားခဲ့သည်။
ရွှေအစစ်ဟု သတင်းထွက်ပေါ်ခဲ့သော ဗုဒ္ဓဆင်းထုတော်ကို ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ရာ ကြေးတချို့ ပါဝင်နေကြောင်း သိရသည်။
“ဒေသခံတွေရဲ့ ဆန္ဒအရ မြောက်ဦးမြို့မှာပဲ တည်ထားကိုးကွယ်သွားဖို့ လုပ်ဆောင်နေကြ ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းပုံစံ မပျက်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာပါ။ ကျနော့်ဆန္ဒလည်း အဲဒီလိုပဲ ကိုယ့်ဒေသမှာပဲ ထားချင်ပါတယ်” ဟု ရခိုင်ပြည်နယ် ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးအောင်သန်းတင်က ဧရာဝတီကို ပြောသည်။
ရှေး ရခိုင်ဘုရင်များ ထီးနန်းစိုးစံခဲ့ရာ မြောက်ဦးမြို့၌ ရှေးဟောင်း လက်ရာ ဘုရား၊ ပုထိုးစေတီများနှင့် ရှေးဟောင်း အဆောက်အအုံ ထောင်ပေါင်းများစွာ ရှိနေပြီး တချို့သော စေတီပုထိုးများ၊ အဆောက်အအုံများမှာ ပျက်စီးနေ ပြီဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာအစိုးရ က မြောက်ဦးမြို့ကိုဖြတ်၍ ဖောက်လုပ်နေသော မီးရထားလမ်း အတွက်လည်း ရှေးဟောင်း စေတီ ပုထိုးများနှင့် အဆောက်အအုံတချို့ကို ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်းက ဖျက်ဆီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ယခု ဖြစ်စဉ်သည် ရှေးရခိုင် သမိုင်းကြောင်းအား ပြန်ပြောင်း သတိရစေခဲ့ကြောင်း မြောက်ဦးမြို့ခံ တချို့က ပြောသည်။
ရခိုင်ပြည်သူ လူထုက ဒေသတွင်းရှိ ရှေးဟောင်း ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ ထိန်းသိမ်း ကာကွယ် စောင့်ရှောက်နေကြသော် လည်း အာဏာပိုင်များသည် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှ ယဉ်ကျေးမှု အမွေများကို တဖြည်းဖြည်း ပျောက်ကွယ်စေရန် လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု အတိုက်အခံ ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမား ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
ဘီစီ ၅၄၃ မတိုင်မီနှစ်များက ဓညဝတီပြည်ဘုရင် စန္ဒသူရိယမင်းကြီး သွန်းလုပ်ပူဇော်ခဲ့သော မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော် ဘုရားကြီးကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၆ တပေါင်းလတွင် ဘိုးတော်ဘုရား၏ သားတော်ကြီး အိမ်ရှေ့ ဥပရာဇာ ရွှေတောင်မင်းက တောင်ကုတ်လမ်းမှ ပန်းတောင်း၊ ထိုမှ ဧရာဝတီ မြစ်အတိုင်း ပင့်ဆောင်ခဲ့ရာ မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၇ ခုနှစ် ကဆုန်လတွင် အမရပူရ နေပြည်တော် သို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်၊ မဟာမုနိ ရုပ်ရှင်တော်မြတ်သည် နှစ်ပေါင်း ၂၃၂၈ နှစ်တိုင် ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ သီရိဂုတ္တ တောင်တွင် စံတော်မူခဲ့၍ မန္တလေးတွင် နှစ် ၂၀၀ ကျော်ကြာ စံတော်မူခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟု နေထွတ်ပြုစုသော မန္တလေး အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသည်။
Posted on June 7, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	Leaveacomment.